Zvakakosha zvakadini kuwirirana pakati pezita renzvimbo ne SEO?
Maererano nehutatu hukuru hwezvinhu zveGoogle, webhusaiti yeusability, content content, uye backlinking portfolio ndiyo inonyanya kukonzera zvinhu kuti ione kana ichatsanangurwa pamusoro peSERPs, kana kwete. Uye izvi ndezvechokwadi, kunyanya kufunga nezvekugovana kweshumba yevangangodaro vatengi vanogona kunge vaine kushanyira kwavo kwekutanga kumapeji ako ewebhu anobva pane zvakakosha mitsva yekutsvaga.
Nokudaro, zita rakanaka remasimba uye kuchengetedzwa kweSeO kunogona kunzi mazita emamwe mabhuku. Kufunga nezvesimba rega rega zita rinoparadzaniswa, rinowanzovakwa nezita rekambani, rakatsigirwa nemashoko akakodzera uye anoomesa mazwi makuru nemitsara inokosha. Asi mubvunzo pamusoro pekubatana pakati pezita redaire uye SEO zvinokonzera kuGoogle's rankings nguva dzose iri nyaya yakakanganisika. Mushure mezvose, pane pane zvakasvibiswa zvehupupuriro zvekubatana zvakananga pakati pezita rezita ne SEO? Ndicho chikonzero ndakasarudza kuva nechikonzero chikuru chiri muchidimbu uye chakatsigirwa nemamwe mashoko akaoma pasi apa.
Hapana mitemo yakasimba
Kutaura zvazviri, zvikamu zveGoogle zvakatarisa hazvina kumbobvira dziine mirayiridzo yakaoma kana zvido zvepamutemo zvatingazoziva nhanho nhanho. Zviri pachena kuti mhizha huru iri kuita zvakanakisisa kudzivirira chero kushandiswa kana kushandiswa kunonyengera, asi chimwe chinhu chingava nechokwadi - maererano nematambudziko akawanda emitambo, kune mazana maviri ezvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana zvinowanikwa mukugadzirisa kwekupedzisira kwekutsvaga webhusaiti yepamusoro rwandu rwetsvaji yekutsvaga peji yehutsva. Tichifunga mamwe mazano anokosha neaimbova vashandi, pamwe chete nedzimwe pfungwa uye pfungwa dzinonzwisisika, pane zvimwe zviitiko zvinogoneka kubva pakutsvaga zita rezita uye SEO kuchengetedza kuuya naro.
Funga vashandi varipo, kwete tsvakurudzo dzekutsvaga
Zvechokwadi, sarudzo yakarurama yekutsvaga ndiyo nhanho inokosha iyo inoenda nenzira yekubudirira kwako paIndaneti munguva refu. Uye ini ndinorumbidza pano kuti nditange zita rekushandisa rine ushamwari kutanga uye mberi. Hapana chikonzero chekuedza kugadzirisa zvakananga kune zvido zvekutsvaga. Zvakanyanyisa kufungisisa nezvevashandi chaivo, saka ndinopa kuva nefupfupiso, zita rekuona neziso uye risingakanganwiki, iro raizove rakakosha uye rinoonekwa pano. Inzwa wakasununguka kuisa mubhizinesi nezita rako rebhizimisi, uyewo mazwi akarurama uye kushamwaridzana kwavo.
Zvinyorwa zvitsva zvekutsvakurudza mashoko
Kutarisa kumashure, mazita aya echirongwa anosanganisira izwi rekodzero rakashandiswa kuve neropafadzo yakasiyana kupfuura mamwe ose makwikwi mu Google search results. Nguva idzodzo dzakapfuura kare, uye hutungamiri hukuru hwei keyword domains zvino hupfeka. Iye zvino injini dzinotsvaga dzinofanirwa kuonga iyo mawebsite anobatsira zvikuru kumunhu, i. e. , ine unhu hunoenderana nehuwandu. Asi chirevo chekare chinonzi keyword domains chinenge chiri kushanda, sekufananidza mazwi mashoma mumutauro wezita rekushandisa kune vamwe-ushamwari-kubvumira kubvumira vashanyi kuti vaite ukama pakati pemubvunzo wekutsvaga wega uye yeji yeji yega zvayo pachayo. Kwete kureva kuti URL dzakadai dzichanyanya kukosha pakugovana, uyezve kuunza chiitiko chakanaka pamusoro pekudarika-kuburikidza nehuwandu. Kuita kudaro, iwe unogonawo kukurudzira Google kupa chikwangwani chako nehupamusoro hutsika. Saka, usati uzvidzike pakuita shanduko yezvinyorwa zvitsva pakutsvaga zita rako remasita. Iwe hauzodembi, ndine chokwadi Source .